Farmaajo Oo Eed Kulul Ujeediyay Dowlada Xildhibaandana Baaq udiray +COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Farmaajo Oo Eed Kulul Ujeediyay Dowlada Xildhibaandana Baaq udiray +COD
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa bixiyey wareysi cusub oo uu kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka Soomaaliya.
Farmaajo oo la hadlay idaacadda Shabelle ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay haysatay fursad wanaagsan oo ay dalka dib u heshiisiin iyo nabad waarta ay ugu hogaamin kartay markii ay xilka qabatay, balse ay lumisay.
Farmaajo waxa kale oo uu ka hadlay dilalka xildhibaannada baarlamanka Soomaaliya loogu geysto magaalada Muqdisho, waxaana uu xildhibaannada ugu baaqay inay taas ka qaadaan dhiiri-gelin, oo aanay niyad jabin ama baqin.
Waxa kale oo uu ka hadlay falalkii ay dowladda Soomaaliya ay maalmahan ku weerareysay siyaasiyiin iyo xildhibaanno
degan magaalada Muqdisho, taasi oo uu dhaliilay qaabka ay dowladda u wajahday.
Farmaajo waxa uu walaac ka muujiyay qaabka ay howlgalladu u sameynayaan Ciidamada Dowlada, waxa uuna tilmaamay in Dowldadu looga baahan yahay inay sameyso qorshe dib u heshiisiineed oo keeni kara in dadka hubka haysta ay aaminaan nidaamka dalka, taasi oo horseedi karta inaysanba u baahan hub.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa sidoo kale ka hadlay xil ka qaadistii dhowaan lagu sammeeyey xeer ilaaliyihii guud ee qaranka, isaga oo sheegay in habka dowladda ay wax u maamushay aysan ahayn mid waafaqsan dastuurka, wuxuuna sheegay in dastuurka oo la dhinac maro ay keeni karto in dadku diidaan sharciga.
Waxa kale uu ka hadlay go’aankii ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ugu hanjabtay waalidiinta laga yaabo in caruurtooda ay ku jiraan Shabaabka, waxaana uu sheegay in qof qaan gaar ah wixii uu geysto aan loo qaban karin waalidkiis.
Farmaajo, ayaa dhinaca kale shaaciyey inay jirto rajo xummo weyn oo laga qabo dowladda Soomaaliya, loona baahan yahay in dowladda federaalka ay isku soo dhoweyso shacabka, waxaana uu shacabka ugu baaqay inay dowladda taageeraan, sababta oo ah buu yiri “dowlad xun waxa ay dhaantaa dowlad la’aan”.
Maxamed Cabdullahi Farmaajo, waxa uu caddeeyey inuu weli rajo ka qabo inuu hoggaamiyo dalak Soomaaliya, oo uu kusoo laabto, islamarkaana wax u qabto dadkiisa, oo aanu marnaba meel cidlo ah uga tago.
HALKAN KADHAGAYSO FARMAAJO